Enwere ike inwe ihe ọhụụ El Niño na ọkara nke abụọ nke afọ | Netwọk Mgbasa Ozi
Enwere ike inwe ihe ọhụụ El Niño na ọkara nke abụọ nke afọ
El Niño bu ihe omuma banyere onodu ubochi nke na adi na oge nke 5 rue 7. N'agbanyeghị nkwụsi ike nke afọ a 2017 nwere, World Meteorological Organisation (WMO) anaghị achị 100% na ihe omimi nke ihu igwe a ka nwere ike itolite.
Ihe omume a na - eme ka ikuku ifufe na - efega na ndagwurugwu Peru na Ecuador, nke na - akpata oke ifufe dị egwu nke ebe okpomọkụ na ebe ndị a na - ebute oke idei mmiri. N'aka nke ọzọ, na India ọ na-ebute oke ọkọchị nke na-ebute nsogbu nri na ọrụ ugbo. Ihe omume El Niño ọ ga-eme ọzọ na 2017?
1 O yikarịrị ka ọ ga-eme
2 El Niño Aja
3 Mmebi nke El Niño kpatara
4 La Niña onu
O yikarịrị ka ọ ga-eme
WMO na-egosiputa ihe omume puru iche nke ihu igwe nke sitere na ufodu mgbanwe dika mgbanwe ngbanwe, uzo ikuku, oke ikuku, wdg. Ọ bụ ya mere, dabere na ụfọdụ akaebe, ọ wepụtara nkwupụta na-ekwu na site na elu elu enwere ike ịnwe ọnọdụ ihu igwe dị iche iche site na ọnọdụ na-anọpụ iche na mmemme El Niño, ma nke agafeghị oke.
Gịnị ka ị pụtara agafeghị oke osisi ike? Ọfụma na ebili mmiri na El Niño nwere ike iwepụta ga-adị obere karịa ka ọ dị na mbụ. Ifufe ahia ahụ ga-eji obere ike, nke na-agaghị emepụta ihu buru ibu nke na-ebute oke ebili mmiri. Ndị na-ahụ maka ihu igwe nwere ụdị nke na-ebu amụma mgbanwe mgbanwe ihu igwe na ihu igwe, ma ekele dịrị ha, ha nwere ike ịgba mbọ hụ na ọkara nke abụọ nke 2017 ihe omume El Niño nwere ike ime na ihe puru ime n'etiti 50 na 60%.
N'aka nke ọzọ, ihe puru omume na ihu igwe nke ọkara nke abụọ nke afọ ga-anọpụ iche bụ 40%.
El Niño Aja
Dika ihe omuma a, obu ezie na amara ya, nwere ike isiri ike ighota, agam ekwu okwu banyere nyocha di nkenke. Ihe omuma a na - ebute oke mmiri oku na oke osimiri Pacific. Nke a na - ebute mmụba nke oke osimiri na ụsọ oké osimiri. Dị ka anyị maara nke ọma, ikuku na-ekpo ọkụ na-arị elu na mbara igwe ma ọ bụ ebe ahụ, mgbe ọ na-adaba na igwe ikuku oyi, ọ na-agbakọ ma malite iwepụta igwe ojii cumulonimbus na-emepe emepe. Igwe ojii a na-abụkarị ihe kpatara oké ifufe na, na nke a, oké ihu igwe ihe.
Ihe omume El Niño ikpeazụ mere na nkeji nke anọ nke 2015 na mmalite 2016 (ya mere oke okpomọkụ na-ata ahụhụ n'oge oyi ahụ) ma nwee mmetụta na-agbawa obi n'ọtụtụ akụkụ ụwa. Anyị kwesịrị iburu n'uche na El Niño nwere nsonaazụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa dum, ebe ọ bụ na ebili mmiri na-ebuga okpomọkụ gaa ebe niile.
Mmebi nke El Niño kpatara
Agbanyeghị na El Niño bụ ihe okike, n'ihi mgbanwe ihu igwe na mmebi ọnọdụ okpomọkụ nke ụwa, ọ na - abawanye ma na - abawanye ugboro ole ọ na - eme. El Niño na 2015 metụtara nde mmadụ 4,2 na Central America, nde 4,7 na ọdịda anyanwụ Pacific na nde 30 na ndịda Africa, ndị ụnwụ nri na ụkọ nri metụtara n'ihi ụkọ mmiri ogologo oge. Ke adianade do, enye ama anam ọkpọsọn̄ edịm edep ọtọn̄ọde ke Galapagos Islands tutu esịm mbenesụk Ecuador ye Peru, emi Ha kpatara ọnwụ 101, 19 furu efu, 353 merụrụ ahụ, ndị 140.000 metụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 940.000 metụtara.
Ka ọ dị ugbu a, ọnọdụ okpomọkụ nke oke osimiri nke oke ọwụwa anyanwụ nke ngwụcha ọwụwa anyanwụ nke Pacific emetụtala Peru na mba ndị gbara ya gburugburu ka njọ. Nke a na-eme ka ọnọdụ El Niño nọpụ iche.
La Niña onu
N'aka nke ọzọ, ndị ọkachamara n'ihe gbasara ihu igwe WMO kwuru na mmemme La Niña dị oke egwu. N'adịghị ka El Niño, nke na-akpata mmụba na okpomọkụ nke igwe mmadụ Pacific, La Niña na-akpata mbelata na ha. Ọ bụ ya mere ụfọdụ mpaghara na-arịa ụkọ mmiri ozuzo mgbe El Niño mere na-enwekarị oke mmiri ozuzo nke na-abawanye na nkezi nkịtị ma ọ bụ na ntụgharị.
La Niña jikọtara ya na oke ajọ ifufe na Oke Osimiri Atlantic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Enwere ike inwe ihe ọhụụ El Niño na ọkara nke abụọ nke afọ
'Ala ọma jijiji nke narị afọ' ọzọ nwere ike ime na Chile